नेपालको घुम्नपर्ने गन्तव्यः पुनहिल (फोटो फिचर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेपालको घुम्नपर्ने गन्तव्यः पुनहिल (फोटो फिचर)
तस्वीर सौजन्य : राजन सिंह महर्जन
काठमाडौँ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पर्ने आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा पुनहिललाई चिनिने गरिन्छ।
उक्त स्थानबाट हिमशृङ्खला र सूर्योदयको दृष्य अवलोकन गर्न पाइने हुँदा पर्यटकका लागि उक्त स्थान निकै आकर्षक मानिने गरिन्छ।
कास्कीको घान्द्रुक, म्याग्दीको भुरुङ–तातोपानी, मोहरेडाँडा हुँदै घोडेपानी पुग्न सकिन्छ। घोडेपानी पुग्ने पर्यटकहरू सूर्योदय र हिमशृङ्खलाको सौन्दर्यमा रमाउन बिहानै करिब एक घण्टा पैदल हिँडेर पुनहिल पुग्ने गर्दछन्।
पुनहिलबाट सूर्योदयका साथै धौलागिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मनास्लुलगायतका १६ वटा हिम दृष्य अवलोकन गर्न सकिने हुँदा यसलाई छुटाउन नहुने उत्कृष्ट गन्तव्यमा लिइने गरिन्छ।